Ciidamada Shiinaha Oo isaga baxay Deegaanno lagu muransanyahay oo dhaca xuduuda Hindiya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ciidamada Shiinaha Oo isaga baxay Deegaanno lagu muransanyahay oo dhaca xuduuda Hindiya.
On Jul 7, 2020 1,348 0
Sida ay ku waramayaan saraakiil sar sare oo la hadlay warbaahinta, kana tirsan dowladda Hindiya, ciidamada Shiinaha ayaa billaabay iney isaga baxaan deegaanno lagu muransanaa oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen ciidamadaas.
Waadi dhaca buuraha Himilaaya ayay isaga baxeen ciidamada Shiinaha, iyagoo kala baxay gawaaridii gaashamanaa ee ay halkaas ku yimaadeen markii ay billaabaneysa xiisada u dhexeysa wadamada Shiinaha iyo Hindiya.
Ka bixitaanka ciidamada Shiinaha ee deegaankan waxay timid kadib wadahadal dhexmaray jeneraallo sar sare oo labada dhinac ah, kuwaas oo ku heshiiyay in xaaladda la dejiyo, ciidamada is hor fadhiyana la kala qaado.
15-kii June ayay ahayd markii dagaallo xoogan ay ciidamada Hindiya iyo kuwa Shiinaha ku dhexmareen deegaanno dhaca xuduud beenaatka labada dal, waxaana halkaas Hindiya looga dilay 20 askari, inakstoo Shiinuhu aanu ka hadlin khasaaraha soo gaaray.
Diblumaasiyiinta labada dal waxay xaqiijiyeen iney isku af garteen in xaaladda la dejiyo, islamarkaana aaney jirin cid u heellan dagaalka.
Dhulka Hindiya xuduuda la leh waa dhulka Turkistaanta bari ee ay leeyihiin Muslimiinta, kaas oo ay gumeysi ku heysato dowladda shuuciyadda ee Shiinaha, waxaana muslimiinta halkaas degan ay la kulmayaan dhibaatooyin adag.